စီးပွားရေး နဲ့ သံသယစိတ် – Gentleman Magazine
သံသယစိတ်ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ?
သံသယစိတျကို ဘယျလိုအသုံးခမြလဲ ?
အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ယုံကြည်နေရမှာဖြစ်သလို သင်ကျရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့ လိုပါတယ်။ အခုခေတ်ကာလမှာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ အကြီးမားဆုံးကြုံတွေ့တဲ့ ပြဿနာက ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အခက်ကြုံရတဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပြီး လက်လျှော့ အရှုံးပေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင် ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်တိုင်က သံသယ ရှိနေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက် သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို မှန်မမှန်မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့ သံသယတွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုဟာ သံသယကင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ သံသယတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို သံသယတွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သံသယတွေက တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဖော်မွန်ကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သံသယစိတ်တွေဟာ ရှင်းထုတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် မရှိပဲနဲ့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ သံသယတွေဟာ အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုး ခွဲခြားစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကို မေးခွန်းထုတ်ပြီး စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်မလုပ်မိအောင် သတိပေးနေတဲ့ သတိပေးစက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သံသယစိတ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူဖြစ်နိုင်သလို အပေါင်းအသင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သံသယစိတ်တွေက အကောင်းအဆိုးကို ချိန်ညှိတတ်စေပါတယ်။ သံသယစိတ်သာမရှိဘူးဆိုရင် နည်းစနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ထက် ထင်ရာစိုင်းဖြစ်ဖို့ ပိုများပါလိမ့်မယ်။ သံသယစိတ်ကို အသုံးချနိုင်ဖို့ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ရာရောက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆုံးမှာတော့ သံသယစိတ်တွေကနေ ထူးထူးခြားခြား အသိတွေကို သိလာနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်အခြေအနေကို ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေ၊ အပြစ်အနာအဆာတွေ၊ မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေ၊ ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။
သံသယစိတ်တွေဟာ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်လည်း အဆက်အစပ်မရှိပဲ မှားယွင်းတဲ့ သံသယတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းတဲ့ သံသယစိတ်တွေကတော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ယုံကြည်စိတ်လိုမျိုး အပျက်သဘောဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် သံသယစိတ်တွေက ဆားနဲ့ တူပါတယ်။ လိုအပ်သလောက် ပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်ရင် ဟင်းလျာရဲ့အရသာကို ထူးကဲကောင်းမွန်စေပြီး လွန်ကဲသွားမယ်ဆိုရင် အာခေါင်ခြောက်ပြီး သွေးတိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
သံသယစိတ်တွေကို လက်ခံပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ခိုင်မာနေပါစေ။ ခေါင်းထဲက သံသယအတွေးတွေကို လစ်လျူရှုလိုက်တာထက် သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်လာစေဖို့ ခုတုံးတွေအဖြစ်နဲ့ အသုံးချဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အောငျမွငျမှုရရှိဖို့အတှကျ သငျ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျကို ယုံကွညျမှုရှိဖို့ လိုပါတယျ။ သငျလုပျနိုငျတဲ့အရာတှကေို ယုံကွညျနရေမှာဖွဈသလို သငျကရြှုံးသှားနိုငျတယျဆိုတာကိုလညျး ယုံကွညျလကျခံထားဖို့ လိုပါတယျ။ အခုခတျေကာလမှာ စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျတှမှော အကွီးမားဆုံးကွုံတှတေဲ့ ပွဿနာက ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ အခကျကွုံရတဲ့အခါမှာ ယုံကွညျမှုပြောကျဆုံးသှားတတျပွီး လကျလြှော့ အရှုံးပေးသှားတတျကွပါတယျ။ အလှယျပွောရရငျ ကိုယျ့စှမျးဆောငျရညျကို ကိုယျတိုငျက သံသယ ရှိနတောကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ သငျ့မှာ ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိဖို့လိုအပျပါတယျ။ ယုံကွညျမှုရှိဖို့အတှကျ သငျရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတိုငျးကို မှနျမမှနျမေးခှနျးထုတျနတေဲ့ သံသယတှကေို ဖွတျကြျောနိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ယုံကွညျမှုဟာ သံသယကငျးတာမဟုတျပါဘူး။ သံသယတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျတာဖွဈပါတယျ။
ဒါဆို သံသယတှကေို မကျြကှယျပွုထားလို့ ဖွဈနိုငျပါသလား။ သံသယတှကေ တနျဖိုးရှိတဲ့ အဖျောမှနျကောငျးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သံသယစိတျတှဟော ရှငျးထုတျပဈခငျြလောကျအောငျ စိတျရှုပျစရာကောငျးတာ မှနျပမေယျ့ မရှိပဲနဲ့လညျး မဖွဈပါဘူး။ သံသယတှဟော အကောငျးအဆိုး အကွောငျးအကြိုး ခှဲခွားစိတျပဲဖွဈပါတယျ။ အရာအားလုံးကို မေးခှနျးထုတျပွီး စိတျကူးတညျ့ရာ လြှောကျမလုပျမိအောငျ သတိပေးနတေဲ့ သတိပေးစကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သံသယစိတျတှဟော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရနျသူဖွဈနိုငျသလို အပေါငျးအသငျးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သံသယစိတျတှကေ အကောငျးအဆိုးကို ခြိနျညှိတတျစပေါတယျ။ သံသယစိတျသာမရှိဘူးဆိုရငျ နညျးစနဈတကြ လုပျဆောငျဖို့ထကျ ထငျရာစိုငျးဖွဈဖို့ ပိုမြားပါလိမျ့မယျ။ သံသယစိတျကို အသုံးခနြိုငျဖို့ကတော့ မလှယျပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကို စိနျချေါရာရောကျပွီး စိတျဓာတျကစြရာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆုံးမှာတော့ သံသယစိတျတှကေနေ ထူးထူးခွားခွား အသိတှကေို သိလာနိုငျပါတယျ။ ဈေးကှကျအခွအေနကေို ပိုပွီးရှငျးရှငျးလငျးလငျးမွငျနိုငျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စီးပှားရေးဆိုငျရာ ပတျသကျဆကျနှယျမှုတှေ၊ အပွဈအနာအဆာတှေ၊ မကောငျးတဲ့အကငျြ့ဆိုးတှေ၊ ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး ရှငျးလငျးစှာ သိရှိလာစနေိုငျပါတယျ။
သံသယစိတျတှဟော လကျလြှော့အရှုံးပေးလိုကျဖို့ လှုံ့ဆျောပေးနတောမဟုတျပါဘူး။ ဒီလို ဖွဈစမေယျဆိုရငျလညျး အဆကျအစပျမရှိပဲ မှားယှငျးတဲ့ သံသယတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ မှားယှငျးတဲ့ သံသယစိတျတှကေတော့ မကျြလုံးစုံမှိတျယုံကွညျစိတျလိုမြိုး အပကျြသဘောဆောငျသှားနိုငျပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ သံသယစိတျတှကေ ဆားနဲ့ တူပါတယျ။ လိုအပျသလောကျ ပမာဏကို အသုံးပွုနိုငျရငျ ဟငျးလြာရဲ့အရသာကို ထူးကဲကောငျးမှနျစပွေီး လှနျကဲသှားမယျဆိုရငျ အာခေါငျခွောကျပွီး သှေးတိုးသှားစနေိုငျပါတယျ။
သံသယစိတျတှကေို လကျခံပွီး မှနျမှနျကနျကနျအသုံးခနြိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ခိုငျမာနပေါစေ။ ခေါငျးထဲက သံသယအတှေးတှကေို လဈလြူရှုလိုကျတာထကျ သငျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ပိုမိုထူးခွားကောငျးမှနျလာစဖေို့ ခုတုံးတှအေဖွဈနဲ့ အသုံးခဖြို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
Previous: ဆီးအောင့်ထားခြင်း၏ အကျိုးအပြစ်များ
Next: သင့်ဖွားဖက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ရမည့် လက္ခဏာများ